ဘုန်းကျော်: 10/01/2008 - 11/01/2008
တလ မြန်မာငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်း) ပေးမည်
ကိုဘုန်းကျော်(လူ့ဘောင်သစ်) ဘလော့ဂ်အတွက် Blogger သတင်းထောက် နှစ်ဦးအလိုရှိပါသည်။ လစာငွေ ဖြင့်တလကို မြန်မာငွေကျပ် ငါးသောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးမှ တစ်ယောက် နှင့် ရန်ကုန် မှ တစ်ယောက် ခေါ်ယူခန့်ထားမည်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ကျနော့်အီးမေးကို ဆက်သွယ်နိုင် ပါသည်။ ကျနော်မှ ဖုန်းပြန်ခေါ် မည်ဖြစ် သည်။ ခေါ်ဆိုရန် ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းပေးပါ။ phone_kyaw@hotmail.com and wgdperth@gmail.com
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, October 31, 2008
လုပ်ကြံပြီး ပြောဖို့ကတော့ စိတ်ကူးထဲတောင်မထည့်ပါနဲ့။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, October 30, 2008
နှစ် ၂၀ နှင့် ကျနော့်တော်လှန်ရေး
စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဟု ကင်မွန်းတက်သည်။ အာဏာရှင်ကို ပြုတ်ကျစေချင်သည်။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ တက်စေချင်သည်။ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်တချို့သည် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သည်။
တချို့သည် မိသားစုအရေး ကို ဦးတည်သွားသည်။ တချို့သည် ဖောက်ပြန်သွားသည်။ တချို့သည်....
တချို့ရဲဘော်များသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံး သောက်ရင်း တော်လှန်သည်။
ရေဒီယိုတဖက် နှင့် တော်လှန်သည်။
တချို့သည် တော်လှန်ရင်းကျော် ပြန်သည်။
တချို့ သည် ငါ ဘယ်တုန်းက ဘာဖြစ်သည်ဟု ကိုယ့်အချင်းချင်းတော်လှန်သည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, October 29, 2008
ဒီပုံကတော့ ထမင်းချက်ရင်း ဘီယာသောက်နေတဲ့ ပုံပါ။ ညနေဆောင်း အလုပ်ကအပြန် ထမင်းချက်နေတာပါ။
ဒီပုံတော့ သူ့ညီမ နဲ့ အမေ ကိုရိုက်ထားတာပါ။
ဒီပုံကတော့ သူတို့မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာပါ။ သူတို့ကိုပြုံးခိုင်းတော့ အဲဒိအတိုင်း ပြုံးပြပါတယ်။ အနောက်က ခန့်ခန့်ငြားငြားပြုံးနေတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငယ်ဆုံးဓာတ်ပုံ ဆရာလေးပါပဲ။
ဓာတ်ပုံဆရာက အသက် (၄)နှစ်သားပါ။ တယ်လီဖုန်းမှာ ပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ။ အမှတ်တရ သိမ်းထား မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, October 22, 2008
ကိုမိုးသီး Blog မှာ KNU ရဲ့ နောက်ဆုံးညီလာခံမှာ နော်စီဖိုးရာစိန်ကို အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ခန့်အပ်လို့ ဆိုပြီး ချီးကျူးထားတာကို ဖတ်ရပါတယ်။ ချီးကျူးတာလား အဝေးကနေ လှမ်းဖားတာလား မသိဘူး။ နောက်ပြီး လူ့ဘောင်သစ်ပါတီနဲ့ ABSDF မှာ အမျုိးသမီး ခေါင်းဆောင်မှုကို မရရှိသေးဘူးလို့လည်းဖတ်ရတယ်။ ဒီမှာ မေးစရာ တခုရှိတယ်။ ကျနော်က လူ့ဘောင်သစ်က ရဲဘော်တစ်ယောက်ဆိုတော့..... လူ့ဘောင်သစ်မှာ ဘယ်အမျိုးသမီးက များ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းကို နေရာယူဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဝင်ရွေးခံလို့လဲ။ တကယ့်အရည်းအချင်း ရှိရင် မဲပေးအုံးမှာ.....စနစ်တကျညီလာခံကော ရှိခဲ့လို့လား....စနစ်တကျဆိုတာ ...... ဒီမိုကရေနည်းစစ်စစ် ကိုဆိုလိုတာပါ။
ABSDF တော့မသိဘူး။ ကိုမိုးသီးက ABSDF ကော၊ အပါတီမှာရော လုပ်ဖူးတော့ သိမှာပါ..........
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, October 19, 2008
ကမ္ဘာဒီယားကတော့ မှန်တယ် သူ့ရဲ့  နယ်မြေကို ကျူးကျော်လာတဲ့ သူတွေကို ပြန်ဆုတ်ဖို့အချိန်ပေးတယ်။ ဒါကို ထိုင်းကလက်မခံဘူး။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်က ချမယ်လို့ပြောတာပဲ။ ကမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံသားတွေက တော့ တော်တော်တင်းတယ်။ Perth မှာ ရောက်နေတဲ့ ကမ္ဘာဒီးယားမိသားစုတွေက ပြောတယ် မြန်မာတွေ အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့။ ထိုင်းတွေ မကောင်းဘူးတဲ့။ သူတို့ရဲ့ နယ်မြေနဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကို ထိုင်းက လိုချင်နေတယ်။ အဲဒိသမိုင်း ကြောင်းကို မြန်မာလူမျိုးပညာရှင်တွေထဲကနေ ရေးသင့်တယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, October 16, 2008
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လာဘ်အစားဆုံးငါးနိုင်ငံရဲ့ စာရင်းကို CPI နိုင်ငံတကာပွင့်လင်းမှုနှင့် လာဘ်စားမှုစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ကနေ ၂၀၀၈-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒိ ၅-နိုင်ငံကတော့-
၅)အာဖဂန် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စာရင်းအရတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယမြောက် ပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒီသတင်းကိုတော့ မြန်မာ့အသံ၊ မြ၀တီ၊ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံတို့မှာ တခမ်းတနား ဖော်ပြတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီ ၅-နိုင်ငံတွေဟာ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေပါပဲ......
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးကောင်စီ ရဲ့  လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တို့ရန်သူ ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ် ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဒုတိယ လိုက်တာဖြစ်မယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, October 15, 2008
" ပါတီရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အားလုံး ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေ"
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ သေကွဲကွဲကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလို၊ ရှင်ကွဲ ကွဲကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျနော် တို့ရဲ့ အသည်းနှလုံးထဲမှာ ပါတီအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဟာ ဘယ်လောက်ပဲဝေးနေပါစေ မပျောက် ပျက်ပဲ ပိုလို့တောင် ခိုင်မြဲလာခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ပါတီဝင်အားလုံးဟာ တနေ့တချိန်မှာ ပါတီရဲ့ အရိပ် အောက်မှာ အားလုံးပြန်လည် ဆုံတွေ့ နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်း..............
ပါတီရဲ့ (၂၀) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ပါတီဝင်အားလုံး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရဲဘော် ဘုန်းကျော် (ခေတ္တ သြစတျေးလျ)
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, October 12, 2008
နှစ် ၂၀-ပြည့် ပါတီရဲ့ သဘောထားကို ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ကျေငြာ ပါတယ်။
DPNS Statement on 20th Anniversary _2008 October 14 - UploadaDocument to Scribd
အထွေအထွေအတွင်းရေးမှုး ကိုခင်မောင်တင့်ရေးသော ပါတီ သမိုင်း
The History We Have Struggled _by GS for Party Birthday - UploadaDocument to Scribd
အိမ်လည်သွားတယ်။ လူတွေကမေးတယ်။ မင်းဘာလုပ်နေလဲ။ ကျနော်ဖြေတယ်။ ကျောင်းတက်တယ်။ ကားမောင်း သင်တယ်။ ထပ်မေးတယ်။ အိမ်မ၀ယ်သေးဘူးလား။ ထပ်ဖြေတယ်။ မ၀ယ်သေးဘူး။ ကျောင်းပြီးအောင်တက်အုံး မယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတယ်။ လူတွေကမေးတယ်။ ကျောင်းတက်နေလား၊ အလုပ်လုပ်နေလား။ ပြန်ဖြေတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့အိမ်မ၀ယ်သေးတာလဲ။ ပြန်ဖြေတယ် ကျနော့်ခလေးတွေကြီးလာရင် သူများတွေက မင်းတို့အဖေ ဘာလုပ်လဲလို့မေးရင် သူတို့ကို ကျနော့်အဖေ Factory Hand (စက်ရုံအလုပ်သမား) လုပ်တာလို့ မဖြေစေချင်လို့။
သူကထပ်ပြောတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ရလည်း အလုပ်မရနိုင်ဘူးတဲ့။ နောက်ပြီး ဒီကနိုင်ငံသားတွေတောင် စက်ရုံတွေမှာ ၀င်လုပ်နေသေးတာ။ ကျနော်ပြန်ဖြေတယ်။ ဟုတ်တယ် သုံးစားလို့မရတဲ့လူတွေပဲ လုပ်တယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, October 11, 2008
ပြည်တွင်းက အစိုးရ၀န်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဘ၀ ကွာခြားပုံ (ခေတ်လူငယ်ထဲကရသည်)
ယခင်ကအစိုးရ၀န်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အတော်ကွာခြားသည်။ယခုလဲကွာခြားမှုရှိနေဆဲ၊
ယခင်လစာမှာအစိုးရ၀န်ထမ်းက အတော်နည်းသည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းက အောက်ခြေအဆင့်
မှာတောင် မြန်မာပိုင်ကုမ္ပဏီတွေမှာ တစ်သောင်းအနည်းဆုံးရပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ထမ်းပင်
လျှင် FEC 70 လောက်ရသည်။ အရာရှိလစာဆိုလျှင် မပြောနှင့်တော့။
ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာတစ်ယောက် လစာအနည်းဆုံး ၄၀၀၀၀မှ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်ရှိသည်။ အရောင်း
ဖက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာဆိုလျှင် ရောင်းရငွေပေါ်မှာ အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ နှစ်စဉ် Annual
bonus ရသေးသည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဆိုလျှင် မန်နေဂျာလစာ FEC 200 မှ အထက်ရှိသည်။
အစိုးရ အမှုထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူး Level ထက် (လစာ) များသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေလစာအပြင် Bonus နှင့် ခိုင်ကြေးများကလွဲ၍တခြားဘာမှမရ။ သိပ်ကြီးသော
ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှသာလစာအပြင်တခြားbenefitများရသည်။ဥပမာ Hand Phone ပေးထားသည်။
Transportation အတွက် ကားပေးထားသည်။ UN လိုအဖွဲ့အစည်း NGO မျိုးဆိုရင်နေစရာ အိမ်
Resident ပေးသည်။ မိသားစုရှိလျှင် ကလေးကို ကျောင်းထားပေး သည်။ အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့်ရ
သည်။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် Vacation အပန်းဖြေခရီးထွက်ခွင့်နှင့် စရိတ်ပေးသည်။ အစိုးရအရာရှိမှာ
လစာ(ယခင်က) နည်းသော်လည်း ရုံးကားရသည်။ ဆန်၊ ဆီ၊ သကြား(ယခင်က) ရသည်။ တခြား
အထောက်အပံ့များလည်းရသည့်အပြင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်အတွင်းမှ Benefit တွေများကြီးရှိသည်။
ရုံးချိန်မှာလည်း ၉း၀၀ နာရီမှ ၅း၀၀ နာရီအထိသာဖြစ်ပြီး စနေနေ့ ရုံးပိတ်သည်။ကုမ္ပဏီတွင်တိုင်း
ပိုဆင်းခိုင်းလေ့ရှိသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများ Overtime ပေးသည်။ အချို့မပေး။အလုပ်လျှောက်စဉ်
Interview ခေါ်စဉ်ကပြောသော ရုံးချိန် အပြင် အပိုဆောင်း ရုံးချိန်များဆင်းပေးရသည်။ အစိုးရရုံး
များ စနေနေ့ပိတ်သည်။ ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများစနေနေ့ဝက်ဆင်းပေးရတာရှိသလို တစ်နေ့လုံး
မပိတ်သောကုမ္ပဏီလည်းရှိသည်။ ယခင်တုန်းက အစိုးရ ရုံးများ၊ တက္ကသိုလ် များစနေနေ့ဝက်ဖြစ်
သည်။ နောက်မှစနေတစ်နေ့လုံးပိတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါသည်။ ၁၉၂၀မတိုင်မှီကတည်းကရန်ကုန်
ယနေ့ခေတ် ပုဂ္ဂလိကများ ကတော့ အကြောင်းပြချက် (၂) ခုဖြင့် စနေဆင်းခိုင်းသည်။ နံပါတ်
(၁) အကြောင်းပြချက်မှာ သူတို့သည်အစိုးရရုံးများထက်ပိုအလုပ် များသောကြောင့်ဖြစ်၏။ နံပါတ်
အကြောင်းပြ၏။ ယခုအစိုးရ၀န်ထမ်းလစာများ နိုင်ငံတော်၏ကြီးမားသော ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်အ
နေ့ဆင်းကြဟု မပြောပါ။ စနေနေ့ အလုပ်ပိတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး ကားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်
ကိစ္စအ၀၀ရှိကြလှပါသည်။စနေနေ့တွင်ထိုကိစ္စများကို လုပ်နိုင်သည့်အပြင် မိသားစု စည်းစည်းလုံး
လုံး နေထိုင်ခွင့်၊ မိဘဘိုးဘွားများထံသွားရောက်ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုခွင့်များရကြသည်။
နိုင်ငံတော်အတွက်ကား စနေနေ့ရုံးပိတ်သဖြင့် လမ်းပေါ်မှာကားကြပ်ခြင်း Traffic Jam နည်း
ပါးသွားသည်။ ရုံးအဆောက်အဦး၊ ပရိဘောဂ၊ စက်ကိရိယာနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ တစ်ရက် ဆိုဆို
သလောက်နားခွင့်ရသည်။စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်စာစွမ်းအားချွေတာခွင့်၊ လောင်စာဆီချွေတာခွင့်
မည့်သူများရုံးတက်ကြသည်။ အစည်းအဝေးထိုင်ကြသည်။ ညလုံပေါက်မိုးအလင်းအလုပ်လုပ်ကြ
သူ များလည်း အများအပြားပင်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများကတော့ စနေနေ့မပိတ်သည့်အပြင်လိုအပ်
လျှင် လိုအပ်သလ်ို အခြားရုံးပိတ်ရက်တွေမှာပါ ဆင်းပေးရလေ့ရှိသည်။ ထိုအခါမျိုး၌OVER TIME
တော့ပိတ်ရက်တစ်ရက်ကိုယ့်ဖက်ကပေးလိုက်ရတာအမှန်ပင်။ ထိုပိတ်ရက်မျိုးတွင် အိမ်ကရေတိုင်
ကီ ပြင်ချင်သူလည်းရှိသည်။ မိသားစုများမကျန်းမာ၍ပြုစုချင်သူ။ ဆေးခန်းပို့ချင်သူလည်းရှိသည်။
ဘုရားသွားကျောင်းတက်၊ အဓိဌာန်ဝင်၊ ပုတီးစိပ်၊ တရားထိုင်သူလည်းရှိသည်။ ကျောင်းတက်ချင်
သူ သင်တန်းတက်ချင်သူသင်တန်းတက်နေသူတွေလဲရှိသည်။ တကယ်အလုပ်များသော၊ စနေတ
ကယ်ဖွင့်ရန်လိုသော ကုမ္ပဏီများကိုတော့ဘာမှမပြောလို။ ရေးချင်သည်မှာအချို့ကုမ္ပဏီများစနေ
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားသူသွား၊ ဂျာနယ်ဖတ်သူဖတ်၊ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးဖဲကစားသူ၊VCD ဖွင့်သူက
ဖွင့် နေ့တ၀က်အချိန်ဖြုန်းပြီးပြန်သွားကြ။ ဘာမှအကျိုးမှမမြင်ပါ။ အလကားအချိန်တွေကုန်ဆုံးပြီး
လျှပ်စစ်မီးတွေ၊ လောင်စာဆီတွေ နေ့တ၀က်စာ၊ တစ်ရက်စာ ဓါတ်အား ကုန်သွား တာသာအဖတ်
ယခု နိုင်ငံတော်က ၀န်ထမ်းလစာ များမြှင့်တင် လိုက်ရာ ၀န်ထမ်းတွေ ၀မ်းသာကြည်နူး သာဓု
ခေါ် ကြကုန်သည်။ကြားရသူတိုင်းပင်ပီတိဖြစ်ကြ။မုဒိတာဖြစ်ကြရသည်။ ယခင်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း
မှာ ခုကလေ”ဟုအော်ကျယ်စွာဖြင့် ပြောနိုင်လာကြသည်။ ၀န်ထမ်းလောကမှ ကုမ္ပဏီလောက သို့
ပြောင်းရကောင်းနိုးနိုး စဉ်းစားနေသူတွေ မပြောင်းမိတာတော်သေးရဲ့ဟု သတ်ပြင်ချနိုင်ကြသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုဧပြီလကုန်မှကျန်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလစာများအစများစွာတိုးမြှင့်ပြီ။၀န်ထမ်း ဖြစ်
ရသည်မှာ ကောင်းလေစွ။ လစာလဲကောင်း။ စနေလဲဆင်းစရာမလို(မှတ်ချက်-ယခု လခများသော
ကြာနေ့ထုတ်ပေးမည်ဆိုပါကစနေရုံးပိတ်ရက်မှာ Shopping ထွက်လို့ရပြီ။Gazette Holiday တွေ
ဆိုခွင့်ပါယူပြီးကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးသွားမလား။ ပုဂံဘုရားများဖူးမလား။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများရော
ပုဂ္ဂလိကမို့ သူ့အထွာနှင့်သူ့ဟာဟုလည်းစိတ်ဖြေနိုင်သည်။ ဘာပဲပြောပြော ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအခွင့်
အရေးကား အစိုးရ၀န်ထမ်း နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်နည်းပါးသည်ဟုဆိုရမည်။သည်တော့တိုင်း
ရင်း သားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဘာလုပ်မလဲ။ လစာတိုးမလားစနေပိတ်မလား?
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, October 10, 2008
ကျနော်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာဟာ လူ့ဘောင်သစ် ရောက်မှပါ။ ပါတီကနေ အထူးသဖြင့် ကိုထွဋ္ဋ် ဆီကနေ နိုင်ငံရေး သဘောတရား။ လူတန်းစားအကြောင်း စသဖြင့်ရမိတယ်။ နောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားတော့ စာအုပ်အများကြီး မဟုတ်ဘူး တချို့ လျှောက်ဖတ်မိရင်း စဖြစ်တယ်။ အခုထိ အင်တာနက် သတင်းကို ဖတ်ရင်တောင် အများစု တော်လှန်ရေး ၀က်ဆိုက် နဲ့  ဘလော့တွေဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ခေတ်ပြိုင်။ ဘီဘီစီ။ အာအက်ဖ်အေ။ ဒီဗွီဘီ။ရိုးမသုံး။ နောက် ကိုမိုးသီးဘလော့ဂ်။ အာဇာနည်။ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ စသဖြင့် နေ့တိုင်းလိုလို ဖတ်မိတယ်။
အရင်တုန်းက သတင်းနားထောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းအလုပ်နဲ့ကျောင်းနဲ့ ဆိုတော့ နားထောင်မဖြစ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့။ အဲဒိသတင်းတွေနားထောင်ပြီးရင် စိတ်ဓာတ်တက်လာတယ်။ နောက်ပြီးခလေးလည်း (၂) ယောက်ဆိုတော့ မိသားစုဘက် ဦးစားပေးရအုံးမှာပဲ ဆိုပြီး ခဏ နားဖြစ်တယ်။ ဒါတောင်မရဘူး။ တခါတလေ ဘုန်းကြီးအရေး ဒို့အရေး စသဖြင့် ပွဲတွေမှာ အုပ်ပျော်လုပ်ဖြစ်သေးတယ်။ ဆရာဒေါက်တာမျိုးညွှန့် ကလည်း Perth မှာဆိုရင် သူက ထိပ်ဆုံးက ကြွတက်တယ်။ ဆရာ ကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာရေ မိသားစုအရေးကို ဦးစားပေးအုံးမယ်။
အဲလိုမျိုး နိုင်ငံရေး ကိုစိတ်ဝင်စားမိတော့ အားမလိုအားမရ တာတွေရှိသလို။ လုပ်စားတာမြင်ရင် ဒေါသထွက်တာလည်းကြုံရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ နိုင်ငံရေးကို ဆက်လုပ်ဦးမယ်။
ပြည်ပမီဒီယာ နှင့် ပြည်တွင်းအင်အားစု
ကျနော်တို့ဘက်က မီဒီယာတော်တော်များများက ဘာ့ကြောင့်များ စစ်အစိုးရ ကောင်းကြောင်း။ တချို့ သော ဗိုလ်ချုပ်တွေ တော်ကြောင်း။ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ သဘောထားကောင်းကြောင်း မတင်ပြကြတာလည်း မသိဘူး။ တချိန်လုံးသတင်းတွေက Negative Sense တွေချည်းပဲတွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တခါတလေစဉ်းစားမိတယ်။ သူတို့ (နအဖ)မှာရော ကောင်းတဲ့အကွက်တွေမရှိဘူးလား။ ရှိရင်မတင်ပြသင့်ဘူးလား။ ဥပမာ NLD ကော တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကော၊ ၈၈ ကျောင်းသားအင်အားစုတွေကော။ အားလုံးပေါ့ တချို့ စစ်အစိုးရ လုပ်ကွက်တွေကို ကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းကြောင်း မပြောသင့်ဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် စစ်အစိုးရကော ကောင်းတဲ့ အရာတွေကို လုပ်တာမရှိလို့လား။ ကျနော်တော့ တခါတလေ တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့ စဉ်းစားမိ တယ်။ စစ်အစိုးရလည်း သူတို့ပြောတဲ့ ပြည်ပအားကိုးတွေဟာ တခါတလေ ကောင်းကြောင်းမပြောသင့် ဘူးလား။
တခါတလေမီဒီယာမှာ Group Mail တွေမှာ တော်လှန်ရေးအင်အားစုက ဘယ်သူက ဘယ်လိုလုပ်စားပြန်ပြီ၊ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို…….. စသဖြင့် တော်လှန်သမားအချင်းချင်း ထောက်ပြဝေဖန် မကောင်းကြောင်း ပြောတာတော့တွေ့ရတယ်။ ကောင်းကြောင်းပြောတာလည်း ရှိတယ်။ ချီးမွန်းတာလည်း တွေ့ဘူးတယ်။ အဲလိုမျိုးကျနော်တို့အချင်းအချင်ကြားမှာ တောင်ရှိရင် ဘာ့ကြောင့်တခြားသူ (နအဖ) ကိုလည်း ကောင်းရင် ကောင်းကြောင်း။ မကောင်းရင် မကောင်းကြောင်း တင်ပြသင့်တယ်။ မီဒီယာတွေကိုပြောတာပါ။ နအဖ ဘက်က လိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျနော်လည်း နအဖ ကိုချစ်ပါတယ်……ဟဲဟဲဟဲ။
နိုင်ငံတကာဆုရှင်များနှင့် ကျနော်တို့ရဲ့ အကိုတော်ကြီးများ……..
ချီးမွန်းတာဆိုလို့စကားမစပ် ပြောရအုံးမယ်။ ဒေါ်စုဆိုရင် နိုင်ငံတကာက ပေးတဲ့ဆုတွေ တထောကြီး သူကတောင်သူများတွေကို ပြန်အမ်းရမဲ့ အနေအထား။ ကိုမင်းကိုနိုင်လဲရှိတယ်။ ကိုဇာဂနာလည်းရှိတယ်။ မစုစုနွေးလည်းပိုင်တယ်။ မခင်ဥမ္မာလည်းရတယ်။ ကိုအောင်မျိူးမင်းလည်း ရှိတယ်။စသဖြင့် စသဖြင့်။ ဘာ့ကြောင့်များ ကျနော်တို့အကိုကြီးများ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ ကိုမိုးသီး။ အောင်သူငြိမ်း။ ကိုအောင်မိုးဇော်။ ကိုဝင်းနိုင်ဦး။ ကိုတွေစသဖြင့်…………….. သူတို့ကော မရသင့်ဘူးလား။ သူတို့ကကော မလုပ်လို့လား။ ဆုရချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ မေးခွန်း မေးဖြစ်တာပါ။ သူတို့လဲ ရသင့်တာပေါ့။ ရှိနေရင်း မသိလို့နော်။
ပြောချင်တာကိုပြောတာပါ။ ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ အဲဟုတ်ပြီ ခေါင်းစဉ်က စစ်အစိုးရ ကောင်းကြောင်း ပြောရအောင်…………………
ကျနော်ပြောချင်တာက စစ်အစိုးရလို့ပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစုလည်း ကောင်းတာလေးများရှိရင် ချီးမွန်း ပေးဖို့.......
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, October 09, 2008
သြစတျေးလျရဲ့  အိမ်၊ ခြံမြေ ဈေးနှုံးနဲ့ ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်သလဲ
မြန်မာတွေအများစုကတော့ ဒီလို အိမ်မျိုးတွေဝယ်ကြတယ်။ ခြံနဲ့ဝန်းနဲ့ဆိုတော့ မိသားစုအတွက်ကောင်းတယ်။အခုပေါက်ဈေးကတော့ ၃-သိန်းပါ။
အခုဆိုရင် Perth မှာ အခန်းသုံးခန်း၊ ရေချိုးခန်းတစ်ခန်း နဲ့ အိမ်(ခြံအပါအ၀င်) ဆိုရင် ၃ သိန်းခွဲနဲ့ ၄ သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။ ၂၀၀၄-ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ ဈေးခုန်တက်သွားတာ။ ဈေးတက်သွားတဲ့ အကြောင်း အရင်းနှစ်ခုအဓိက ရှိတယ်။ တခုက Mining Booming ကြောင့်ပဲ။ Perth က Western Australia မှာ ရှိတယ်။ WA က သြစတျေးလျမှာ Mine နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်ပေါ်တယ်။ လစာလည်းအရမ်းကောင်းတယ်။ Mine မှာ သာမန်အလုပ်သမားတစ်ယောက်တောင် တနှစ်ကို ဒေါ်လာ (၇၀၀၀၀) လောက် စားပြီးသောက်ပြီး ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့်တခြားမျို့  ကလူတွေ အတော်များများပြောင်းလာတယ်။အိမ်ဝယ်ခြံဝယ်လုပ်တော့ ဈေးက အရမ်းကိုတက်သွားတယ်။ ၂၀၀၀-ခုနှစ်မှာ ရောက်တဲ့မြန်မာ မိသားစု ၀ယ်တုန်းက အိမ်တစ်လုံးကို ၁-သိန်းလောက်ပဲပေးရတဲ့ အိမ်ဟာ အခုဆို ၃-သိန်းခွဲဖြစ်နေတယ်။ နောက်တခု ဈေးတက်တဲ့ အကြောင်း အရင်းက Perth ကို Migrant တွေ Refugee တွေ တအား လှိမ့်ဝင်လာတော့ ၀ယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအား မမျှတဖြစ်လို့ပဲ။ အခုနောက်ပိုင်း သာမန်စက်ရုံအလုပ်သမားတွေဆိုရင်တောင် မ၀ယ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နည်းလမ်းရှိတယ်။ ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်သလဲဆိုတာ။
အစိုးရက လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ ဒီအစဉ်အစဉ်တွေကတော့ တနှစ်ကို အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေက ဒေါ်လာ ၇-သောင်း အောက်ဖြစ်နေရင် အစိုးရ အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက် ၄၀-ရာခိုင်နှုံး စိုက်ပေးတယ်။ အလုပ်သမားက ၆၀-ရာခိုင်နှုံး စိုက်ပေးရတယ်။ အိမ်ပိုင်ဖြစ်တာက အစိုးရက ၄၀-ရာခိုင်နှုံး၊ ၀ယ်သူက ၆၀-ရာခိုင်နှုံး။ ဒီလိုနဲ့ဝယ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။ ၀ယ်ယူဖို့ စပေါ်ငွေကတော့ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဘဏ်ထဲမှာရှိရင်ရတယ်။ ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်က Full Time Permanent ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်မှာ အနည်းဆုံး (၆) လ ဆက်တိုက်လုပ်နေသူဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်က ဈေးဆိုင်သေးသေးလေးမှာ ဆိုရင် Reputation နဲ့ Credibility မရှိတော့ ၀ယ်လို့မရနိုင်ဘူး။ Company ကြီးကြီးတွေမှာ လုပ်ရင် ရတယ်။ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၇၀၀၀၀ အထက်ဆိုရင်တော့ ၁၀၀-ရာခိုင်နှုံးအိမ်ပိုင်ဖြစ်ပြီ။
Perth မှာနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေအများစု နေထိုင်တဲ့အိမ်တလုံးပါ။ အခုပေါက်ဈေးက ဒေါ်လာ သုံးသိန်းပါ။
ဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံချေးရတယ်။ အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံချေးချင်တဲ့ ဘဏ်တွေ အများကြီး။ လက်ထဲမှာ စပေါ် တစ်သောင်းလောက်ရှိရင်ရတယ်။သြော်စီနိုင်ငံသား၊ မဖြစ်ရင်တောင် Permanent Resident ဖြစ်ဖို့တော့ လိုတယ်။ ပြန်ဆပ်တဲ့အခါ ၂၅-နှစ်နဲ့ (၃၀) နှစ် ပြန်ဆပ်ရတယ်။ တလကို ချေးငွေပေါ်မှုတည်ပြီး ပြန်ဆပ်ရတယ်။ ဥပမာ ဒေါ်လာ ၃-သိန်းချေးတဲ့သူဟာ တလကို ၂၁၀၀ လောက်ဆပ်ရမယ်။ စက်ရုံမှာ လုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေက ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။ အခွန်ပေးပြီးရတဲ့ငွေနော်။ ဒီငွေက လစာကောင်း တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ၂၁၀၀-ပေးလိုက်ရင် ၄၀၀ နဲ့ကိုယ်မိသားစုမကျွေးနိုင်ဘူး။ အဲလိုမျိုးဆိုရင် ဘဏ်ကလည်း ငွေမချေးဘူး။ လင်မယားနဲ့လုပ်ရင်တော့ ၀ယ်နိုင်တာပေါ့။ တစ်ယောက်ရဲ့ လစာကို အိမ်ဖိုးနဲ့ စားဖို့ပေးယုံးပဲ။ တစ်ယောက်ကတော့စုပေါ့။ အိမ်ထောင်သည်နဲ့ခလေးရှိတဲ့သူတွေကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း ဈေးတွေတဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်။ ၃သောင်းလောက်ထိကျသွားတယ်။ စိတ်ထင်တာ့ ၀ယ်လိုအား နည်းလာလို့ ဖြစ်မယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေရှိတယ်။ သူတို့နဲ့ဆိုပိုစိတ်ချရတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေကြတော့ စကားပြောတာကအစ ဂရိုစိုက်ရတယ်။ လိမ်နိုင်တယ်။
တချို့ မြန်မာတွေ အိမ် နှစ်လုံး သုံးလုံးပိုင်တယ်။ တစ်လုံးနေပြီး ကျန်တဲ့အလုံးတွေကို ငှားစားတယ်။ သူတို့ကျတော့ ဈေးပေါတဲ့အချိန် ၀ယ်ထားတာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်။
တချို့ မြန်မာ ပိုက်ဆံရှိသူတွေဟာ အိမ် ၄ သိန်း ငါးသိန်းတန် ကို လက်ငင်းပေးဝယ်ကြတယ်။ ငွေတွေ ဘယ်ကရလမသိဘူး။ တွင်းများရှိလား။ သာမန် လူတွေကြတော့ လက်ငင်းပေးဖို့နေနေသာ အလုပ်ရှိတာတောင် မ၀ယ်နိုင်ဘူး။ သြောစီမှာ ဆိုးတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ပျဉ်ထောင်အိမ်၊တဲအိမ် တွေနဲ့ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ငွေပေါ်မှုတည်ပြီး နေလို့မရဘူး။ အားလုံးက သူတို့တူးတားတဲ့ တွင်းထဲကို ခုန်ချလိုက်ဖို့ပဲ။ အားလုံးနီးဟာ တတန်းတည်း လိုဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ရှိတယ်။ ကားရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထင်မကြီးဘူး၊ အထင်လဲမသေးဘူး။ အားလုံးနီးပါးဟာ အကြွေးတွေနဲ့ လုံးပါး ပါးနေကြတယ်။ ပိုက်ဆံ သုံးသိန်းချေးရင် ဆပ်ရမှာက ၆-သိန်းဆိုတော့ ငွေရှိတဲ့သူတွေကို လုပ်ကျွေးနေရသလိုပဲ။ Public House နဲ့ နေကြသူများ
သူတို့ကတော့ အကျွေးကင်းပြီး၊ စိတ်ချမ်းသာသူများ၊ သက်သာတဲ့သူများလို့ခေါ်နိုင်တယ်။ အစိုးရ အိမ်မှာ နေတယ်။ အစိုးရ ထောက်ပံ့တဲ့ ငွေနဲ့ရပ်တည်တယ်။ အိမ်လခပေးရတော့လည်း နည်းနည်းပဲပေးရတယ်။ တပတ်ကို ၇၅-ဒေါ်လာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေနေရလဲဆိုတော့ ပင်စင်စားသူတွေ။ မသန်မစွမ်းတွေ။ ယောက်ျားမရှိခလေးတွေတပြုံကြီးနဲ့ စတဲ့သူတွေပါ။ အစိုးရ အိမ်လျှောက်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးလေးနှစ်ကြာနိုင်တယ်။
၃။ http://www.hsbc.com.au/1/2/personal/home-loans အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက် ငွေချေးမယ်ဆိုရင် ဒ်ီဘဏ်က အကောင်းဆုံးပါ။
တနေ့တနေ့ အိပ်တယ်။စားတယ်။ သွားတယ်။ အလုပ်လုပ်တယ်။ မိုးချုပ်တယ်။ မိုးလင်းတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်သွားတယ် ငါဘာလဲ ။ ငါဘယ်လဲ။ ငါ့ယဉ်ကျေးမှုလဲ မတွေ့ရဘူး။ ငါ့စကားလဲ မပြောရဘူး။ TV ဖွင့်တယ်။ အဖြူစကား နားထောင်ရတယ်။ Radio ဖွင့်တယ် သူတို့စကားပဲ ကြားရတယ်။ ဘဏ်သွားတယ်။ သူတို့စကားပဲပြောရတယ်။ စိတ်ညစ်တယ်။ ငါဘာလုပ်မှာလဲ။ Bill ပေးတယ်။ အိမ်လခပေးတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ငွေတွေ စားတယ်။ ပေးတယ်။ ဘာလဲ့ကွ ဘ၀………..
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, October 08, 2008
မြန်မာ အပြာဆိုက်။ http://moekyashweko.ning.com/
ကြော်ငြာတာမဟုတ်။ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘောင်းဘီတို နဲ့ စကတ်ဝတ်ရင်တောင် ကဲ့ရဲ့ ချင်တဲ့သူ ခပ်များများ။ ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်။ လူသိမခံချင်ကြတဲ့သူတွေလဲရှိတယ်။ ဒါကို မိုးကျရွှေကိုယ် ချိုးဖောက်ဖို့အတွက် တီထွင်တယ်။ မိုးကျရွှေကိုယ် လို့ပြောရင် မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ မြန်မာတွေကို နှစ်သက်သူတိုင်း သိတယ်။ မြန်မာလူကြီးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ မကြိုက်ချင်ရောင်ဆောင်တဲ့ သူက လွဲရင်ပေါ့။ သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်လို့မှ မရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ တလ နှစ်လ အတွင်းမှာ အသုံးပြုသူပေါင်းဟာ ကိုမိုးသီး ဘလော်ဂ်ထပ်များတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံး အားပေးရမယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ရှိသင့်တယ်။ အပန်းဖြေစရာပေါ့ဗျာ။ ထောက်ခံပါတယ် မိုးကျရွှေကိုယ်ရေ.............။
စံခ(ဘုရားသုံးဆူ)နှင့် တဘက်ကမ်း ထိုင်းနယ်မြေ။ (၂) နှစ်နီးပါး အတူနေဘူးတော့ သူ့ ရဲ့ လေးစား အတုယူဖွယ် ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို တွေ့ခဲ့တယ်။ စကားပြောယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်။ ဘ၀ အခက်အခဲတွေ အများကြီးနဲ့ ဘ၀ အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်သန်း နေတဲ့သူ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူချစ်တဲ့တော်လှန်ရေးမှာ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေဆဲ။
စံထိုက်တဲ့အကြောင်း........ကတော့ အသောက်အစားကင်းတယ်။ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံတယ်။ မသိရင် Wikipedia လားပဲ။ ကြိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာမေး အကုန်နီးပါးပြောနိုင်တယ်။ မနက်မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်ထိ စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာ မခွာဘူး။ ဟာသ ပညာလည်းတက်တယ်။ တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာ သစ္စာရှိသူ။ သူများအပေါ် အပြုသဘောပဲ ဆောင်တယ်။ သူများမကောင်းကြောင်းမပြောဘူး။ ငွေရေးကြေးရေး ဖောက်ပြန်မှု၊ မက်မောမှုကင်းသူ။ သူများတွေ ငွေကြေးကြောင့် ပြဿနာတက်နေချိန် သူ ဂရုမစိုက်တက်သူ။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့စကားလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ဘွဲ့တွေ အများကြီးရထားတဲ့သူတွေထက်သာတယ်။
သူ့ဘ၀ကလည်း အတုယူဖွယ်အားကြဖွယ်ကောင်းတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့စကားပြောမိရင် လူငယ်တိုင်းက သူ့ရဲ့  စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အတုခိုးတယ်။ သူ့ကြောင့် နိုင်ငံတကာရှိ ကျောင်းတွေမှာ တက်နေတဲ့လူငယ် တွေအများကြီး။ နောင်တချိန်တိုင်းပြည်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာ အဲလို လူမျိုးတွေ ဟာ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းအောင် လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်။
ဦးမင်းကြည်နေကောင်းပါစေ။ ချစ်သော သမီးတွေနှင့်အမြဲအတူနေနိုင်ပါစေ။
စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ၊ အရေးပေါ်ဆေးကုသုမှုခံယူရန် စကာင်္ပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည်။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
ဆိုးဝါးလာသဖြင့်၊ အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူရန်၊ မနက်ဖြန် (၃-၁၀-၂၀၀၈၊ သောကြာနေ့)တွင်
နေပြည်တော်မှရန်ကုန်မြို့ သို့ရောက်ရှိ၊ ညအိပ်ရပ်နားပြီး၊ (၄-၁၀-၂၀၀၈၊ စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင်
နေပြည်တော်စစ်ရုံးနှင့်နီးစပ်သော၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။ (သတင်းအတည်ပြုချက်၊
ရရှိရန်၊ ဆက်လက်စုံစမ်းလျှက် ရှိပါသည်။)
Burmese Junta Sr.Gen.Than Shwe needs
immediate medical treatment in Singapore.
It was learnt from Nay-Pyi-Taw inner
sources that Sr.Gen.Than Shwe was serious
ill and arranging for further medical
treatment in Singapore. He will arrive from
Nay-Pyi-Taw to Yangon tomorrow
(3/10/2008) and then to Singapore Saturday
(4/10/2008) as tentatively planned. Probably
his condition is quite serious that he can’t go
straight to Singapore but stopover in Yangon forawhile.
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, October 03, 2008
ကျနော်ဒီစာကိုရေးတာဟာ ကိုယ်သိတာကို ရှယ်တာပါ။ အရမ်းသိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ မှားချင်လဲမှားမယ် မှန်ချင်လဲမှန်မယ်။ ကျနော် ပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။
သြစတျေးလျမှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့၊ မြန်မာစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ မနေနိုင်လို့၊ စာလာသင်ဖို့ စတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်တွေနဲ့ သြစတျေးလျ မှာ မြန်မာတွေ သိန်းချီနေပါပြီ။ သူတို့ဘယ်လို လာကြသလဲ။
လာကြတဲ့အုပ်စုကိုခွဲမယ်ဆိုရင် အုပ်စုသုံးခုလို့ပြောလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ တခုက ငွေကြေးချမ်းသာသူများအုပ်စု၊ တခုက စစ်အစိုးရ နှိပ်စက်လို့ ခိုလှုံသူအုပ်စုပါ။ နောက်တခု ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအုပ်စုပါ။
သူတို့ကတော့ ငွေကြေးချမ်းသာလေတော့ Business Visia နဲ့ဝင်လာကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ ငွေကြေးကို ပြနိုင်ရင် သြစီသံရုံးက ဗီဇာထုတ်ပေးတယ်။ အနည်းဆုံးရှိရမဲ့ ငွေကြေးပမာ ဒေါ်လာငါးသိန်း၊ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် သိန်းခြောက်ထောင်။ သြစီက နည်းနည်းတော့ကြီးကျယ်တယ်။ ငွေရှိတိုင်း ဗီဇာထုတ်မပေးဘူး။ ဥပမာ စစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်(သူခိုးအကြီးစား) တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ လက်ဝေခံ ခွေးသူခိုးတွေကို။
ဒီ Web မှာ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံရနိုင်ပါတယ်။ http://www.immi.gov.au/
ငွေကြေးသိပ်ချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ လောက် တနှစ်စာ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းပါးပါး ရရင်(Advanced Intermediate) အဆင့်လောက်ရှိရင် ကျောင်းတက်နိုင်တယ်။ မြန်မာကျောင်းသားအများစုကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်းကျောင်းတက်ပေါ့။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေက နာရီ အကန့်အသတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့လူအများစုက မြန်မာပြည်မပြန်ကြဘူး။ Skilled Person အဖြစ်နဲ့ သြော်စီမှာ နေလိုက်ကြတာများတယ်။ တချို့ ကျတော့်လည်း ပြန်ကြမှာပါ။ တယောက်မှတော့ မတွေ့သေးဘူး။
၃) Marriage ဗီဇာနဲ့လာသူများ
သူတို့အုပ်စုကတော့ ငွေသိပ်မကုန်ဘူး။ သြစီမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရင် လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ မိန်းမ၊လင် မရှိဘူးဆိုရင် မြန်မာ မိန်းခလေးတွေကိုပြန်ယူ။ တနှစ်စောင့်ပြီးသွားရင် သြော်စီကိုလာလို့ရတယ်။ တချို့ သြစီမှာ နှစ်ပေါင်း သုံးလေးဆယ် ကြာတဲ့အထိနေပြီးတဲ့ မြန်မာအဘိုးကြီးတွေ သမီးအရွယ် မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို လက်ထပ်လာတယ်။ မိန်းခလေး တွေလည်းယူကြတာပဲ။ ယောက်ျားမရှိတဲ့၊သက်ကြီးရွယ်အို မိန်းမတွေကြတော့ မြန်မာပြည်ပြန် ယောက်ျာသွားဝယ် ကြတယ်။ သြော်စီအထိအရောက် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ သောင်းလောက် ပေးရတယ်။ ယောက်ျားကပေးရတာနော်။ ကြိုက်ရင်ဆက်ပေါင်း၊ မကြိုက်ရင် ဆက်မပေါင်းနဲ့။ နောက်တစ် ယောက်ပေါ့။ သူတို့ကတော့ စီးပွားရေးအတွက်လုပ်ကြတယ်။ မျက်စိရှေ့ မှာ တွေ့တာ နှစ်ယောက်ရှိသွားပြီ။
၄) ငွေကြေးအနည်းငယ်ပြည့်စုံပြီး ခုန်ချသူများ
အကြောင်းအမျိူးနဲ့ပြည်တွင်းကနေထွက်လာတယ်။ သြော်စီက ဆွေမျိူးတွေကခေါ်လို့၊ သင်တန်းတက်ဖို့ အလည်လာဖို့ စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရောက်လာပြီး မပြန်ကြတော့ပဲ PR (Permanent Resident) လျှောက်တယ်။ အထူးသဖြင့် သူ၊သူမရဲ့ လုံခြုံရေးက မြန်မာပြည် ပြန်မရ။
မြန်မာပြည် ပြန်ပို့ရင် အသက်ခံရနိုင်တယ်။ ထောင်ချခံရနိုင်တယ်။ စသဖြင့် လိမ်သည်သော်လည်းကောင်း၊ မှန်သည် သော်လည်း ကောင်း လျှောက်တယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ပေါ့။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှ သြော်စီမှာ ၀င်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်တယ်။ ထောက်ခံစာတောင်းတယ်။ ပြီးရင်လျှောက်လွှာတင်တယ်။ PR ရပြီးသွားရင် နိုင်ငံရေး ဆက်မ လုပ်တော့ဘူး။ သွားခေါ်ရင်တောင် စိတ်ဆိုးသေးတယ်။ တချို့ ဆိုရင်စစ်အစိုးရ နဲ့ တောင် ပေါင်းပြီး စီးပွားရေး လုပ်သေးတယ်။
နောက်ထပ်အုပ်စုနှစ်ခုကိုဆက်ရေးပါမယ်။ တခုက စစ်အစိုးရနှိပ်စက်လို့ ထွက်လာတဲ့ ခိုလှုံသူအုပ်စုပါ။ နောက်တခု ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအုပ်စုပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, October 01, 2008
" ပါတီရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အားလုံး ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေ...
နှစ် ၂၀-ပြည့် ပါတီရဲ့ သဘောထားကို ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ပြ...
အထွေအထွေအတွင်းရေးမှုး ကိုခင်မောင်တင့်ရေးသော ပါတီ သမ...
ပြည်တွင်းက အစိုးရ၀န်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဘ၀ ကွာ...
သြစတျေးလျရဲ့  အိမ်၊ ခြံမြေ ဈေးနှုံးနဲ့ ဘယ်လိုဝယ်ယူ...